Kusvirwa naTicha mukomana webasa muKitchen - Part 1 - Nhau Dzevakuru
Kwakange kwapera almost 3 weeks kubva pandakarohwa newonderful dhik yaTicha mukomana wedu webasa apo baba vevana vange vaenda kuHarare kuconference yekubasa. Chaindinetsa ndechekuti ndange ndava kuramba ndichingorota Ticha asina kupfeka achiuya kwandiri nezimboro rake riya range andishanda naro but chaindibhowa dechekuti ndaibva ndamuka kubva muhope. So many times ndakambotraya kudzokera kunorara zvekufosekedza hoping kuti ndingangoita lucky ndikarota the same thing kuti ndikwirane naTicha muhope imomo again but as you know hazvaimboitika.
Apa ini nemurume wangu tange tabvumirana kuti pay yaTicha ikwidzirwe by 50% sezvandakamutaurira Ticha as a gift musi watakwirana. Murume wangu aisaziva ofcourse kuti ndipo pange pane nyaya yacho. In only 3 weeks Ticha ange avakutengawo tuhembe tunotaridzika pluz the other day ndakange ndamutengera matennis enikes nekatrack-suite keaddidas zvandange ndaonawo zviri pasero zvekuti chikomana ichi change chavakutotarisikawo, chavakutondityora moyo every second mufunge zvenyu.
I can’t even imagine kuti ndange ndavakutotadza kurara nepamusana pekamusevenzi katakapika paMbare kasina kana chii zvacho kachitotsvaga pekusevenza kuti kawane chekudya chete. On the other hand ndaizongozvidzora nekuti maybe ifood yangu yandange ndamufidha nayo for the past 2 years yange yaenda kunokudza mboro yaTicha kudaro but on the other hand then what about yababa vevana? Ko zvavariwozve vanotodya more pluz special food, ko zvino sei vange vane kamboro kadiki pane rekaTicha aka?
Zvisinei, baba vevana ndipowo pavakauya iri Wednesday manheru vachibva kubasa vachindiudza kuti vange varikuzoenda kuMalaysia nebasa for 2weeks kubva Friday yatazoibata week iyoyo. Ipapo ndakarohwa nehana ndichifunga kuti zvino Ticha uya avakuzowanazve imwe chance like this here, inga mwari anondida veduwee. Ndakaramba ndakanyarara kunge munhu ange arasika mumhute then murume wangu ndokuzoti ko zvaita sei?
Ini ndakabva ndakurumidza kufunga ndikabva ndati, ‘ Inga pabasa penyu apa mavakwira ladder chaizvo, kubva mapihwa trip yeoverseas, ndiko kubudirira ka uku’. Rume rakanyemwerera richibva rati,’Haaa tirikumboedza mai Chipo, hameno, mwari wacho akada, zvimwe tichangozoitwawo vakuru-vakuru zvikanaka’. Ini nechemumoyo ndakangoti zvangu , kuswera uchienda kwese kure uko panzvimbo yekunotsvaga midzi yekuti mboro ikure kuMbare uko pedyo-pedyo apa. Takazopedza Thursday yacho tichitenga twekuti baba vevana vafambe zvakanaka.
Friday makuseni ndakaudza Ticha kuti ndaida kuzomuona manheru acho iwayo nekuti pane kabasa kandaida kuti aite for me. Aifanirwa kuuya akageza nekuti pane vanhu vechechi vange vachizouya pamba. Manheru kuma6 takanokwidza baba Chipo ndege yaienda nekuLondon. Tichingobvapo ndakaendesa sisi nevana kumba ndokubva ndananga kuMbare kunotenga vhuka-vhuka ndichigadzirira Ticha because musi uyu ndaida kuti kana zvichibvira andiuraye zvake nekusvira. Pandakasvika kumba Ticha ange atova pamba akapfeka track-suite yake itsva but ndakamuudza kuti adiridze maruva ekuseri kwemba. Ndakaudza sisi kuti vana vaifanirwa kunorara nekuti taida kufumira kuenda kuLion & Cheetah Park mangwana acho sekuti yaiva Saturday.
Vana vedu 2 vakabva vanorara chopaz nekuti hapana chimwe chavaida kupfuura kuendeswa kunoona mhuka. Sisi vakazonorarawo sekuti vainge vachizoendawo ku Park nesu. Ndakazovhura window rekuback kwemba ndavakudaidza Ticha nekanzwi kari pasi-pasi kuitira kuti vanhu vepanext door vasanzwe sekuti dzange dzavakuenda kuma9 apa Ticha achiri panze. Ticha akauya ndikamuvhurira door kuti apinde ndikabva ndamubata ruoko ndakananga kukitchen naye. Ndakamuvhunza kuti aida tea here sekuti kunze kwange kuchitonhorera iye akati hongu.
Nechemumoyo ndakabva ndati nhasi wamama chete , ndiyo chance yandaida yekuisa vhuka-vhuka iya yandange ndatenga kune kasekuru kaye kuMbare. Ndakaisa vhuka-vhuka iya mutea yaTicha pamwe chete nemasamba zvekuti Ticha haana kana kumbozviona. Akamwa tea iya zvekukurumidza sekuti kunze kwacho kwange kwamutonhorawo zveshuwa. Achingopedza ndakabva ndamubvunza kuti “Nhai Ticha unofungei nemusi uya”, iye ndokuti “Hapana, asi pane chandakatadza here”.
Ndakabva ndanyemwerera nekuti ndakaona kuti azviona kuti pane kwandange ndakananga. Ndisati ndataura zvakawanda ndakabva ndaenda kumashure kwecheya yaTicha ndokubva ndaita zvekumumbundira from behinda uku mazamu angu akazadza mugotsi rake and then uku ruoko rwangu ruchipuruzira zimboro raiva mukati mebhurugwa rake. It seems Ticha aisapfeka pant becoz rakabva rati zvamu kusimudza bhurugwa.Handina kuda zvekutora nguva yakawanda sekuti ndange ndasuwira zimboro iri zveshuwa, pluz ndaisaziva kuti Ticha achati chii nezvandange ndavakuzoita but heii angarambe kukwira ndiani; Ticha aiva nezimboro zvake but anenge aivawo munzara zvekuti kwaari dzange dzawira mutswanda.
Yaive manna from heaven yaaisambofungira at all. Ipapo ndakabva ndaziva kuti vhuka-vhuka iya yange ichazopika in a few seconds saka zvaitova better kuti izopika tavapakati. Ndakamubvisa trauzi chopaz mukitchen imomo ndokubva rati weeee zimboro kunditarisa kunge rovambira zvekuti ndakabva ndariti dzvii ndokumborishekasheka back and forth kudai soo. Pasina taimu ndakabva ndamudhonza Ticha uya by the mboro ndichienda naye kubedroom achiita kunge mombe yakasungirirwa. Tasvika ndakakurumidzadzawo kubvisa hembe sekuti ndakange ndisina kupfeka kemukati already.
Ndakaedza kuisa zimboro raTicha mukanwa like before but maihweee zvakaitika apa zvakandishamisa; it seems kunge range rakura more kukunda that last time yandakakweshana neshasha iyi, rakatadza kukwana mukanwa mufunge. Ndakaedza zvikaramba ndaikatanga kuita zvekuisa mate nekurinanzva-nanzva all over chete. Iyi yaive jackpot chaiyo kwandiri, handina kumbofa ndakafunga kuti muhupenyu hwangu ndichazoona zimboro rakadai to my reach at any time mufunge.
Rakaita zvekumira kuti twii sekuti vhuka-vhuka iya inenge yange yava kutanga kupicka manje uku Ticha ange angotarisa mudenga akashama muromo zvekuti dai paive nenhunzi yaingopinda mukanwa ichizongobudawo yavakuda. Aiita kunge munhu abatwa nemagetsi kuomesa muviri wese uku akabata musoro nemaoko ese kunge soja ririkusarenda. Ndaiti ndikaridhonzera pasi zimboro riya chopaz then ndodhonzera machende mudenga chopaz kunge munhu arikumutsa chigayo. For 30 minutes chaidzo Ticha handifunge kuti aiziva kwaange ari nekuti mururme akange amukirwa zvaasati or zvandisati ndamboonawo neni.
Ndakazomupushira pabed akadonha pasina kana kupipamaziso akatarisa mudenga chete then ini ndokubva ndamujambira kunomugarira pamuromo nebeche rangu range ratozvimba uku ndokuchisvikirazve zimboro raTicha nemuromo kuita sikisi to nine setup zvekuti pakaita aluta continua chaiyo. Ticha akangobva ati beche mukanwa ndooo akabata zvidya zvangu achizviparadzanisa kunge muti werekeni uku rurimi ruchindipinda pakati pematinji kunge even mboro izvi zvakandishamisa nekuti rurimi rwaTicha rwaiita kunge rwange rwamirawo futi kunge mboro zvekuti I didn’t know kuti vhuka-vhuka inokwanisa kumisa zvese nerumi-nerurimi kudaro.
Ndakakoira rurimi irworwo zvekuti ndakatanga kuita dzungu nekunakirwa ndichiwedzera kufoseredza matinji angu mukanwa maTicha zvekuti nekutota kwange kwaiita beche rangu Ticha aiita kunge kamwana kabva kugezeswa kumeso nesipo but kasina kuzopukutwa netauro. Beche rangu rakange ranzwa nekumira/zvimba zvekuti it seems ndange ndavakutovhara mhino dzaTicha kuti asawane mweya wekufema by mistake zvekuti Ticha akaedza kundisimudzira mudenga uku achiita kunge achanditsemura nekuvhura zvidya zvangu. Paakandisimudzira a little bit ndakarwisa nekuti ndaisada kuti abvise rurimi rwake pacl!t yangu yange yakamira kunge kamboyo kechikomana chine 4 yrs chichangomuka muhope.
During this struggle Ticha akakwanisa kuita contact necl!t yangu pavery sensitive nerve zvekuti ndakaita kunge ndabatwa nemagetsi. Immmeidiately ndakaluza control nekutunda and kwete zvekutamba zviya but zviya zvekuita kunge hosepipe irikudiridza lawn iko kuri kutundira Ticha muface. Padikidiki akaita drown mufunge. Ukuwo ndange ndavakuita kunge ndine mashekamera ekusheka up-and-down zimboro raTicha hoping kuti angangotundewo tikanakirwa tose but rume iri harina kutunda.
A few seconds later Ticha akanditendeudza zvenharo achienda pamusoro pangu kudai soo ndokuchiti zimboro rake pfeeee slowly. Ndakafemereka and nzeve dzangu dzikaita kunge dzablockewa sekuti hapana chandange ndichanzwaanymore. Ticha akaripinza rese bit by bit apa ndichiedza kufema hard at every movement yaaita. Ranyura rese Ticha akatanga kuchikoira manje. Vahuwee musi uyu ndakaita kunge ndichapenga nekukoirwa.
Handisati ndaona munhu anokoira zvakadaro even mumovie kana mumacartoons chaiwo. Aiti akati koikokiokiokoikoikoikoi, then oita kunge avakuzvomora but before I gather conscience dzake obva aritizve bvoooo, koi koi uku akabata mazamu angu kunge munhu aitya kudonha pabhasikoro. Ndakachema misodzi ikapera nekunakirwa. I think zvakatora 2 hrs takadaro ndichingotunda every now and then zvekuti ndakatadza kucounter kuti ndange ndatunda kangani.
Ndakatanga ndichida kuitawo chikapa but to tell you the truth, chikapa chiya chinoshanda pane anemboro diki chete kwete pane ane size dzaana Ticha ava because unocommita chikapacide (kuzvikuvadzisa nekuda kuita chikapa) ukapusa. Beche rinotsemurwa ukasara washama, unozoudza madoctor kuti chii? At one point ndakambogaya kuti nechandazvitangira nhasi but on the other hand kamwe kapfungwa kaiti nakirwa wena midzimu haipi kaviri. Ticha akandikwira in this mishinari pozisheni zvekuti it looks like dai zvaibvumidzwa kuchinja mazita epozisheni ini ndaichinja mishinari iyi to thunderstom pozisheni chaizvo. Haana kana kumboneta kana kufungazvekuzorora.
Chitaimu-taimu, Ticha akati kwaku a little bit ndokubata makumbo angu achiisa tsoka dzangu mumusoro wangu zvekuti beche rakasara raita kunge katennis ball soo, iye ndokuchiti zimboro rake dyooooo again. Iyiii apa ndakarohwa yandange ndisati ndamboona. Kumusha kwake aibva kupiko mwana uyu? Mwana waani anokwira kudai? Sei asina kuenda kuunivesity. Akandikurunga ndakadaro kunge ndange ndamuparira mhosva ndikainzwa ichirova diapghram rangu zvekuti ndakagaya kuti ndichaputiswa malungs angu nemukomana uyu.
Zveshuwa aiva mukomana webasa, ndiko kugona basa manje uku. Ndakakoirwa in this pozisheni ndikafunga kuti ndafenda sekuti handina kuziva kuti ndaivepi. Ndakatunda I don’t know how many times ndichiridza kamhere kari sweet kaya kanenge kaqueen. Ndakarohwa nemboro iyi for about 59 minetsi ndikabvuma zveshuwa kuti dai ndirini mukuru wenyika ndaiti vhuka vhuka ngaitengeswe even mumasupa market chaiwo kana muchechi sechidyo becoz miracle yandakaona musi uyu havasi vakadzi vakawanda vane lucky rakadai.
Previous articleNdakasvira sisi vemukadzi wangu!
Next articleKusvirwa kwandakaitwa nyoro muharare neshamwari yangu!